Rasaas Laga Maqalayo Magaalada Gaalkacyo – Goobjoog News
Wararka naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa waxay sheegayaan in halkaasi ay rasaas goos goos ah isku weydaarsanayaan ciidamada Puntland iyo kuwa Galmudug ee magaaladaasi ku dagaallamay.
Dadka deegaanka Qaarkood oo la hadlay Goobjoog News ayaa sheegaya in rasaasta laga maqlayo halka ay isku horufadhiyaan ciidamada Labada dhinac.
Inta badan xaafadaha magaalada Gaalkacyo waxaa ka barakacay shacabkii degganaa kadib markii ay ka baqeen in dagaalladaasi ay saameyn xooggan ku reebto.
Dagaallada Gaalkacyo ayaa saameyn ku yeeshay ganacsigii magaaladaasi iyo sidoo kale xarumihii Waxbarashada Gaalkacyo, iyadoo weli aaney muuqan dadaallo rasmi ah oo xal looga gaarayo dagaalladan.
Maamulka Puntland ayaa horay u sheegay in magaalada Gaalkacyo ay kula dagaallamayaan ciidamada Al-shabaab, balse Galmudug waxay weerarkaasi ku tilmaantay mid lagu diidan yahay nabadda iyo horumarka magaaladaasi.
Xildhibaan Mahad Salaad: Wax Shaqo oo Golaha Shacabka Ka Socota Ma Leh
Evzzeg nmiskq Cialis fast delivery usa how to get cialis
Qxhbhe eyxcxt Cialis online without prescription canadian pharmacy
Exdqcn alwfqm Buy brand viagra online canadian pharmacy
Abzyfx bundza canada online pharmacy Btcex...
Uhwlov jqinvb canada pharmacy Elkyv...
Qraaxc ykpvcr best online pharmacy Kmfsh...
hydroxychloroquine buy online usa https://chloroquine1st.com...
Vvpslg fwtcyo canada pharmacy Ijofe...